🥇 accounting of wamazinyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 79
Ividiyo yokubalwa kwamazinyo
Oda i-accounting yamazinyo
I-logbook yokubalwa komsebenzi wamazinyo wamazinyo ingabizwa ngokuthi uhlobo lombhalo okumele wonke odokotela bamazinyo abe nawo ukulawula imisebenzi nokusebenza kochwepheshe. I-logbook yokubika yamazinyo wamazinyo kungenzeka ingalawulwa kahle, ngoba uchwepheshe kungenzeka angabi ngesikhathi, akhohlwe noma angafuni ukwenza ukubalwa kwezimali nsuku zonke ngomsebenzi wakhe, ngoba akubona bonke abanesikhathi, isifiso. Ngaphandle kwalokho, kunezinye izinto eziphazamisayo. Ngenhlanhla, kukhona isixazululo kulezi zinkinga. Ngenxa yalesi sixazululo, ukubalwa kwemali kwansuku zonke komsebenzi wamazinyo kungagcwaliswa ngokuzenzekelayo. Futhi, ngasikhathi sinye, lokhu kuba inqubo ejwayelekile yokwenza, futhi ngasikhathi sinye wena nodokotela wakho anichithi sikhathi. Sikhuluma ngohlelo oluyingqayizivele olukuhlinzeka ngemisebenzi yokubalwa kwamazinyo futhi likuvumela ukuthi ubheke ukuqashwa kochwepheshe ngamunye - lena yi-software ye-accounting ye-USU-Soft. Uhlelo lokusebenza luyi-analogue ye-elektroniki ye-logbook yesandla, lapho udokotela efaka khona imiphumela yomsebenzi. Abasebenzi abanegunya bangafaka ushintsho ohlelweni lokubalwa kwamazinyo futhi, ngaleyo ndlela, ukubalwa kwamahora okusebenza noma ukuqokwa kweziguli kuhlelwe ngendlela efanele futhi ungahlala ulawula abasebenzi ngosizo lohlelo oluwusizo olunjalo lwamabhuku wamazinyo. Zonke izenzo ezirekhodwe ohlelweni lwe-accounting yamazinyo ziyagcinwa, kuyilapho umsebenzi owenza ukungena ku-software, kanye nesikhathi nosuku kukhonjisiwe.
Uhlelo lokubalwa kwamazinyo lusebenza ngokuzenzekelayo; Udinga nje kuphela ukungena kule nsizakalo, umsebenzi ozobhekana neklayenti, isikhathi nosuku lokuqokwa. Ukwengeza kulokho, uma ukhombisa inani lokusetshenziswa kwempahla lapho unikeza insizakalo, uhlelo lokubalwa kwamazinyo lugcina amarekhodi ezinto bese luzibhala zisuka endaweni yokugcina impahla ngokuzenzekelayo. Isoftware inamandla okuxhunyaniswa nefoni, ekuhlinzeka ngesivinini esikhulu somsebenzi namakhasimende. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lwe-USU-Soft lunomsebenzi ozokwenziwa ngokwezifiso kumongo wezifanekiso zokuxilonga, izikhalazo neminye imininingwane esetshenziselwa ukuhlinzekwa kwezinsizakalo kumakhasimende. Lokhu kukuvumela ukuthi ulethe ibhalansi emsebenzini wokugcwalisa amafayela. Imephu yamazinyo, etholakala kwisoftware, ikusiza ukuthi urekhode imiphumela yokusebenza okuthile. Ngaphezu kwalokho, ukhombisa ngokuphelele wonke amazinyo bese wenza incazelo yochwepheshe abanemephu efanayo. Ngosizo lwe-USU-Soft, ugcina i-logbook yesisebenzi ngasinye ngokuzenzakalela, ngenkathi ungakhawulela amathuba okushintsha nokususa amarekhodi, futhi ngaleyo ndlela ulawule abasebenzi. Isoftware uhlelo olusha lwesibalo samazinyo esikusiza ukuthi uthuthukise amazinyo futhi ulethe izinga lentuthuko ezindaweni ezingakaze zibonwe futhi unikeze isevisi esezingeni eliphakeme kumakhasimende akho.
Umbiko we-'Pre-registration 'ukhombisa idatha yokuthi mangaki ama-aphoyintimenti akhona okwamanje kurekhodi. Lolu lwazi luqoshwa uhlelo lwezimali zamazinyo nsuku zonke ngasikhathi sinye. Njengoba ukwehla kwesibalo sokuqokwa kwesinye isikhathi kuhlotshaniswa nesikhathi sonyaka noma amaholide athile nemicimbi yedolobha, kukhombisa ukubheka isampula isikhathi esanele ngokwanele, ngokwesibonelo kusuka ngonyaka owedlule (nenyanga efana nalena yamanje) kuya usuku lwamanje. Etafuleni elivelayo ungabona ukuthi isheduli ilayishwe kude kangakanani - inani lokuqokwa nodokotela ngamunye, nakubakaki inani leziguli ezibhaliselwe lokhu kubekwa (ukuvakashelwa okuyisisekelo nokuphindaphindwayo). Igrafu engezansi kwetafula ikhombisa ukuthi isimo somthwalo womsebenzi sishintsha kanjani ngokuhamba kwesikhathi. Kokuhlunga 'Isimo', ungakhetha ukuthi iziphi iziguli onentshisekelo kuzo - 'Ukuvakasha Okuyinhloko' noma 'Ukuvakasha Okuphindwayo'. Isibonelo, unenyuselo, futhi ufuna ukwazi ukuthi kuyasebenza yini futhi kuheha iziguli ezintsha - bese ufaka 'Ukuvakasha Okuyinhloko' esimeni (iziguli eziyinhloko yilabo abangakaqokwa.)
Amathempulethi wokuqopha iziguli eziphuma ngaphandle aselungile akusiza ukuthi wehlise kakhulu isikhathi esisithathayo ukugcwalisa irekhodi lakho lokugula. Ngaphezu kwalokho, ukuba nama-templates kuqinisekisa ukuthi bonke odokotela bagcwalisa amarekhodi eziguli ezisebenzisa iziguli ezifanayo. Ukwenza kube lula ukugcwalisa irekhodi labalaliswayo, uhlelo lokubalwa kwamazinyo lubuye lulungiselele ngokuzenzakalela ubudlelwano phakathi kwe-'Diagnosis 'nezinye izifanekiso. Ngokuya ngokuxilongwa okukhethiwe, uhlelo lokubalwa kwamazinyo luhlunga 'Izikhalazo' ezifanele, 'i-Anamnesis', njll. Ungahlela lokhu kuhlangana. Lapho isiguli sifika emtholampilo wamazinyo okokuqala, imininingwane ngesimo sesiguli (izikhalazo, ukuxilongwa, isimo samazinyo nesomlomo) ingafakwa ohlelweni lokubalwa kwamazinyo. Ukuze wenze lokhu udinga ukudala umqulu wokuqala wokuhlola. Ukunikeza ukuqondiswa kwesiguli mayelana nezindleko zokwelashwa kuyindlela yokuqondisa isiguli ngezindleko ezahlukahlukene zokwelashwa okuzayo kwesikhathi eside kanye / noma okubizayo. Ivumela udokotela ukuthi enze izincomo mayelana nezindlela zokwelashwa, azisekele ngezibalo. Lokhu kukusiza ukuthi unikeze insizakalo esezingeni eliphakeme futhi utshale isiguli ngasinye ubushelelezi bomsebenzi wangaphakathi womtholampilo wamazinyo. Ngaphandle kwalokho, ukunakwa kwemininingwane nakanjani kuzuza ukuthembela kweziguli zakho futhi ngenxa yalokho baqinisekile ukuhlonipha idumela ongalithola ngohlelo oluthuthukisiwe lwe-USU-Soft lokuphathwa kwamazinyo nokuphathwa.